गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या चार लाख घट्ने प्रक्षेपण | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या चार लाख घट्ने प्रक्षेपण
गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या चार लाख घट्ने प्रक्षेपण
२०७६, २९ बैशाख आईतवार ०८:४९
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । ०६८ सालको जनगणनाअनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ३ हजार १६ रहेकामा ०७८ सालमा करिब चार लाख जनसंख्या घट्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक चक्रपाणि आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी जनगणनामा गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २० लाखमा झर्नेछ ।
तथ्यांक विभागका अनुसार हालको गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या २१ लाख ५० हजार छ । १५औँ आवधिक योजना प्रक्षेपित जनसंख्यालाई आधार मानेर प्रक्षेपण गरिएको आयोगका कार्यक्रम निर्देशक आचार्यले प्रस्ट्याए । उनले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई पनि यही प्रक्षेपणलाई आधार बनाउन आग्रह गरे । अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा जनसंख्याको प्रक्षेपण हुने हुँदा यसैलाई आधार बनाउन उनको सुझाब छ ।
पोखरामा शनिबार आयोजित अन्तरक्रियामा प्रादेशिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्दा जनसंख्या कम हुनुको कारणबारे छलफल पनि भएको थियो । सो क्रममा योजना निर्देशक आचार्यले प्रदेशबाट बसाइँ सरेर जानेको जनसंख्या अत्याधिक रहेकाले जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशका अधिकांश जिल्लाबाट बसाइँ सर्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दै, गाउँमा घट्दै
जनसंख्या प्रक्षेपणका प्रमुख आधार जन्मदर, मृत्युदर र बसाइँसराइ हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार यिनै आधारमा अध्ययन गर्दा गण्डकी प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने गाउँमा घट्ने दर तीव्र छ ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि नजिकका जिल्लाहरू स्याङ्जा, पर्वत र म्याग्दीबाट पोखरामा बसाइँसराइले घट्दो क्रमलाई प्रभाव नपार्ने उनको तर्क छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रक्षेपण ठ्याक्कै नभए पनि केही तलमाथि हुने बताए ।
जाने मात्र होइन हामीकहाँ आउँछन् पनि : डा. शर्मा
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्माले भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेकै आधारमा यहाँको जनसंख्या घटेको विषयलाई अस्वीकार गरेका छन् । बसाइँ सरेर जाने मात्र नभई आउने पनि भएकाले चार लाख जनसंख्या नघट्ने उनको दाबी छ । गण्डकी प्रदेशका २६ सहरमा जनसंख्या बढ्दो क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । नुवाकोट र धादिङबाट बसाइँसराइ गरेर पोखरा आउनेको संख्यालाई विभागले नसमेटेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ०६८ सालको जनगणनाले गण्डकी प्रदेशका कास्की र नवलपरासीबाहेकका जिल्लामा जनसंख्या घट्दो क्रममा रहेको देखाएको थियो । nayapatrikadaily.com
Previous articleरासायनिक विषादी घट्दै, जैविकमा आकर्षण बढ्दै
Next articleनेपालमै बन्यो कार्यक्रम चलाउने रोबर्ट